China Track Linear Actuator 12v 24v FD3 orinasa mpamokatra sy mpanamboatra | Sanxing
Ny FD3 Linear Actuator dia Tracker Linear Actuator, mampiasa famolavolana fihetsiketsehana mivantana izy. Ny fananganana tsy manam-paharoa dia mamela ny fampiharana izay mitaky teboka miorina. Ampiasaina be amin'ny fanaka sy ny mandeha ho azy ao an-trano, ohatra, sofa elektrika, fananganana TV.
5000N (Push) / 4000N (hisintona)
1. Ny motera dia nofonosin'ny fonenana plastika tanteraka, manome insulation hafanana, insulation vovoka ary insulation tabataba.
2. Ny mpampitohy aoriana dia tafiditra miaraka amin'ny trano plastika.
Ny actuator dia miasa amin'ny alàlan'ny plastika fotsy. Ity sakana ity dia vita amin'ny POM, afaka mandray ny enta-mavesatra 5000N ny max.
Amin'ny ankapobeny dia misy tapa-by vita amin'ny vy eo amin'ny lohan'ilay mihetsika.
Raha tsy mila izany ny mpampiasa dia tsy hapetraka eo ilay vy, azafady mba jereo eto ambany ny sary eto ambany.
Ny acteuror FD3 dia be mpampiasa amin'ny fananganana fahitalavitra (ampiasaina amin'ny fononteny TV - SXTL TV Lift ), azo apetraka ao anaty kabinetra, na azo apetraka amin'ny faran'ny fandriana. Tena malaza any amin'ny birao sy trano izao.
Ny acteuror FD3 dia azo ampiasaina amin'ny fananganana LCD raha toa ka samy manana ny fononteny ny mpampiasa. Safidy lavitra ny Sanxing remote control.
Teo aloha: DC Linear Actuator Electric FD1
Manaraka: Linear Actuator 24v FD4
Fanaraha-maso lavitra ny fandriana elektrika, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana any amin'ny hopitaly, Fanaraha-maso lavitra ny fandriana fitsaboana, Actuator Linear Micro, Fanaraha-maso lavitra an-tariby ho an'ny hopitaly, Actuator haingam-pandeha haingam-pandeha,